Uwe ejiji agbamakwụkwọ
Agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ na-aghọwanye ewu ewu taa. Ọ bụ ya mere alụmdi na nwunye na-eme atụmatụ agbamakwụkwọ dị otú ahụ aghaghị ịhọrọ uwe kwesịrị ekwesị. N'akwụkwọ anyị, anyị ga-agwa gị ụdị uwe ejiji agbamakwụkwọ maka taa.
Uwe agbamakwụkwọ n'ikike mmiri
Ọlụlụ agbamakwụkwọ na-ewu ewu n'oge okpomọkụ, karịsịa na ebe nkiri ntụrụndụ dị ebube - Maldives, Mauritius, Seychelles na ndị ọzọ. Banyere ụdị ejiji a, na ụkpụrụ ọ nwere ike ịbụ ihe ọbụla - ogologo, lush, obere ma ọ bụ ogologo. Isi ihe dị mkpa dị na agba na ihe ndozi nke ekike a. N'okwasị agbamakwụkwọ n'àgwà ụgbọ mmiri, ọ ga-abụrịrị na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ na ọ na-acha ya, ma ọ bụ uwe niile nwere ike kpam kpam na agba a. Ọ bụ ezie na a na - ejikọta ya ọcha na azure, turquoise ma ọ bụ nkea na - acha anụnụ anụnụ dị mma. Maka ákwà, ọ kacha mma ịhọrọ ụda ọkụ ọkụ. A na-eji ejiji, shells, a na-eji ejiji a na-eji ejiji, na agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ. N'elu isi kama ihe mkpuchi ahụ, ị ​​nwere ike itinye nnukwu ntutu isi dị ka ụdị ifuru, na-ahapụ ntutu isi, ma kwado ya na ọla ntị ọla edo ya na pearl .
Uwe ejiji na ịsụ Bekee
Ọchịchị Britain na-ejikọta anyị n'ụzọ ziri ezi na njigide, nkwesi olu na ihe bara uru. Aha ọzọ maka ejiji Bekee bụ kpochapụ. Ya mere, ezigbo onye England ga-etinye agbamakwụkwọ ya dịka uwe mara mma, na-enweghị nkọwa ndị na-adịghị mkpa, ya na ihe kacha mma. Uwe dị otú ahụ ga-adị mma, dị mfe, na nwanyị a na-alụ ọhụrụ, nke ejiji ụdị a, ga-abụrịrị isi àgwà nke nwanyị - echiche nke imeru ihe n'ókè na ịdị obi umeala. Uwe ejiji na ịsụ Bekee agaghị abụ obere uwe, decollete ma ọ bụ na-adịghị mma. Ọtụtụ mgbe a ga-eji uwe a na-acha ọcha ma ọ bụ ude. Ị nwere ike ịgbakwunye ya na ihe ịchọ mma ndị dị mfe, jigide, obere agbamakwụkwọ .
Uwe uwe agbamakwụkwọ na Ịtali
N'ọdịdị nke Mediterenian, onye nnọchianya na-egbukepụ egbukepụ nọ n'Ịtali, mmetụta nke ndị na-agagharị agagharị, anyanwụ na-ekpo ọkụ na mmiri dị oké osimiri metụtara. Uwe agbamakwụkwọ n'àgwà Ịtali bụ ihe mara mma dịka ya na agụụ nke nwanyị. Ihe ntanchacha nke doro anya, nke ji nwayọọ nwayọọ na-arị elu, mee ka nwanyị ahụ bụrụ "ezigbo hourglass" dị mma, na-ekwusi ike n'obi, hips na ukwu. Uwe agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ Italian na-abụkarị nwanyị na ịhụnanya. Otu nwa agbọghọ ejiji ejiji n'Ịtali bụ ụdị mmasị, na-ezo n'okpuru shei nke naivety.
Uwe uwe agbamakwụkwọ na French
Ihe kachasị mma nke ejiji agbamakwụkwọ nke Europe bụ uwe ejiji na French. Na uwe ndị a ọ bụla zuru ezu bụ ịma mma ma na-agba akaebe na ezigbo French na amara, n'ihi na France bụ synonym maka ejiji na impeccable uto. Ihe ndị dị mkpa nke ejiji ejiji French bụ nke kachasị nke nkọwa, ịdị mma, mma, àgwà nke ịkwado. Uwe kwesịrị dabara adaba na onu ogugu, ya mere ọ kachasị mma ịtọ ya ka o nye iwu.
Ụdị ọzọ nke ejiji na French - uwe agbamakwụkwọ na ụdị nke cancan. O gosiputara na ihe egwu ndi ozo di na cabaret nke Paris na mmalite nke narị afo XIX. Uwe eji eme ndi na-egwu egwu na-adabere na njirimara nke agba egwu, ihe omuma atu bu ugha nke ukwu. Ya mere, a na-agbada ya anya n'azụ na mkpụmkpụ n'ihu.
Uwe uwe agbamakwụkwọ na ụdị a ejiriwo ike dị ukwuu nye ụmụ agbọghọ ndị a tọhapụrụ agbahapụ bụ ndị chọrọ igosi ụkwụ ụkwụ ha, ma n'otu oge ahụ, eji akwa akwa na uwe ogologo. Uwe a dị ezigbo mma - ọ dịghị eme ka a na-agba agba n'oge ịgba egwú.
Uwe agbamakwụkwọ chic
Agbamakwụkwọ ejiji - ihe kacha mma na ejiji ejiji maka nwunye
Uwe agbamakwụkwọ eji ịhụnanya na ụgbọ oloko
Uwe maka agbamakwụkwọ dị ka ọbịa na okpomọkụ
Ememe ahụ nwụrụ, oleekwa ihe jikọrọ uwe agbamakwụkwọ ahụ?
Agbamakwụkwọ edo edo n'enweghị ákwà mgbochi
Agbamakwụkwọ edozi na ákwà mkpuchi
Shawls maka agbamakwụkwọ
Akwụkwọ nri na-ata na ude uto
Kedu ka esi mebie nkịta ọhụrụ?
Basil - ngwa
Ọdọ mpempe akwụkwọ - otu esi ahọrọ?
Cool nwanyi panties
Ogwu na-egbuke egbuke
Foto ndị dị na "Mafia"
Mkpụrụ vaịn dị mma na ihe ọjọọ
Muta ụzọ: ọdịiche dị n'etiti agbamakwụkwọ Megan Markle na Kate Middleton
Onyinye nchara ọlaedo na diamond
Ọkụ na ụlọ
Vinaigrette na squid
Ụdị mgbụsị akwụkwọ
Igwe ụlọ cassette